पुरुषको स्वास्थ्य र फार्मासिष्टहरू: तपाईं मद्दत गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ - चेकआउट | अगस्ट 2021
औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार कल्याण औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस समुदाय, कम्पनी कम्पनी समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार घरपालुवा जनावर
मुख्य >> चेकआउट >> फार्मासिष्टहरूले कसरी पुरुषहरूको स्वास्थ्य लाई बढवा दिन सक्छन्
जुन पुरुषको स्वास्थ्य महिना हो। यो बर्षको समय हो तपाईंको जीवनका केटाहरूको लागि स्वास्थ्य जागरूकता बढाउन समर्पित- छोराहरू, दाजुभाइ, बुवा, बुवा, हजुरआमा, काका, र भतिजाहरू जसलाई तपाईंले ख्याल गर्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा खोज्दैनन्। तिनीहरू स्वास्थ्य जोखिमहरूबारे अनजान छन्। तिनीहरू असुरक्षित छन्, वा स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा शर्मिंदा छन्। वा, केहि केसहरूमा तिनीहरू शारीरिक समस्याको बारेमा कुरा गर्न असहज हुन्छन्, जस्तै स्वास्थ्य समस्या। अर्को शब्दमा, पुरुषहरूको स्वास्थ्य संवेदनशील विषय हुन सक्छ।
भाग्यवस, एक फार्मासिस्टको रूपमा, तपाईं स्वास्थ्य सेवामा तपाईंको भूमिका उठाउन सक्नुहुन्छ यस हेरचाह पाटो पुग्न मद्दत गर्न। फार्मासिष्टहरू स्वास्थ्य सेवा टोलीका अविभाज्य सदस्य हुन् जसले पुरुष बिरामीहरूलाई शिक्षा दिन र उचित स्क्रीनिंग वा उपचारलाई प्रोत्साहित गर्न सक्दछ जब यसलाई आवश्यक पर्दछ।
डिप्रेसन र चिन्ताको लागि सबै भन्दा राम्रो औषधि के हो?
पुरुषहरूको स्वास्थ्यको साथ समस्या
पछिल्ला १०० बर्षमा, मानव जीवन प्रत्याशा धेरै वृद्धि भएको छ। तर यो तथ्य यो हो कि लैंगिक खाल व्यापक हुँदै गएको छैन। यस अनुसार स्वास्थ्य तथ्या .्कहरूको लागि राष्ट्रिय केन्द्र , पुरुष 76 76 को औसत उमेर पुग्छन्। महिला 81१ को औसत उमेर पुग्छन्।
पुरुष भन्दा महिला भन्दा कान्छो मर्न बढी सम्भावना मात्र होईन, तर तिनीहरू केहि पुरानो अवस्थाहरूमा बढी प्रवण छन्। डाटाले देखाउँदछ कि पुरुषहरू बढी विकसित हुने सम्भावना छ मुटु रोग र महिला भन्दा कान्छो उमेरमा पहिलो हृदयघातको अनुभव। पुरुषहरू एम्फाइसेमा र दुई पटक गाउट हुने सम्भावना पनि पत्ता लागेको छ।
जबकि मोटोपना पुरुष र महिलाहरू बीच बढ्दो समस्या रहँदै आएको छ, यो तौल वितरणमा भिन्नता हो जसले अन्य समस्याहरूलाई संकेत गर्दछ। महिलामा, बढी बोसो हिप्स र फिला वरिपरि वितरित हुन्छ। पुरुषहरूमा, अधिक बोसो पेटको क्षेत्र वरिपरि बसेको छ। एक उचित आहार वा व्यायाम योजना बिना, भिज्रल फ्याटले हृदय रोग र टाइप २ मधुमेहको बढेको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
जब यो मानसिक स्वास्थ्यको कुरा आउँछ, पुरुषले महिलाको तुलनामा डिप्रेसनको उपचार लिन कम सम्भावना गर्दछ। उच्च आत्महत्या दर पुरुषहरूको बीचमा सामाजिक मान्यताका साथ एक ठूलो समस्याको वर्णन गर्न सक्दछ। केहि मानिसहरु आफ्ना भावनाहरु को बारे मा अधिक आरक्षित हुन सक्छ वा विश्वास गर्न को लागी सामाजिककृत हुन सक्छ यसले तीहरुलाई समस्याहरु बारे कुरा गर्न कमजोर बनाउँछ।
यी स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि एक उच्च जोखिमको साथ, पुरुषहरूलाई पनि पुरुष लिंगको लागि निर्दिष्ट गरिएको सर्तहरूको सामना गर्नुपर्दछ। यहाँ केहि समस्याहरू छन् जुन तपाईंको बिरामीहरूले सामना गर्न सक्छन्। र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) बीचमा असर गर्दछ %% र पुरुषहरूको १%% to० देखि years 75 वर्ष पुरानो। फार्मासिष्टहरू प्राय: भियाग्रा वा सियालिसको लागि पर्खाइहरू भेट्नेछन्, जसले यसले ठूलो अवसरको लागि बनाउँदछ साइड इफेक्टहरु लाई सम्बोधन गर्नुहोस् वा अन्य चिन्ताहरू। ईडी स्वास्थ्य मुद्दाहरूको सूक्ष्म सूचक हुन सक्छ जस्तै हृदय रोग, मधुमेह, वा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू।
यौन समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न असहज छ, त्यसैले विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। यदि उनीहरूसँग प्रश्नहरू छन् भने, तिनीहरूलाई देखाउनुहोस् कि तपाईं न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र मद्दतको लागि खुला हुनुहुन्छ। तपाई बिरामीहरुलाई पनि आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ कि यो पुरुषहरुमा तुलनात्मक रुपमा सामान्य समस्या हो।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुरुषहरूको लागि क्यान्सरको प्रमुख प्रकारहरूमा प्रोस्टेट क्यान्सर दोस्रो स्थानमा पर्दछ जुन बुढेसकालमा धेरै सामान्य हुन्छ। यद्यपि यो अत्यधिक उपचार योग्य छ र चाँडै समातिएमा अनुकूल रोग लाग्ने रोग हुन्छ।
फार्मासिष्टको रूपमा, तपाई पुरुषहरुलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको लक्षण र लक्षणहरुमा शिक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि मानिसहरूलाई स्क्रीनिंग गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि उनीहरू जोखिममा छन् भने। पुरुष जो छन् Years० बर्ष पुरानो एक औसत जोखिमको साथ एक प्रोस्टेट विशिष्ट antigen (PSA) परीक्षण वा एक डिजिटल मलाशय परीक्षा (DRE) प्राप्त गर्नुपर्छ।
सम्बन्धित: पुरुषहरूको लागि क्यान्सर स्क्रिनिंग: उमेर द्वारा दिशानिर्देशन
टेस्टोस्टेरोन स्तरले पुरुषहरूको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। बुढेसकालको कारण हुन सक्छ टेस्टोस्टेरोन ड्रप गर्न प्रत्येक बर्ष प्रतिशत प्रतिशत पोइन्ट। निम्न टेस्टेरोन स्तरले समस्याहरूको एक संख्यामा योगदान पुर्‍याउँछ:
यदि कम टी स्तर पुष्टि भयो भने, केहि पुरुषहरू टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन थेरापीमा सुरू हुन सक्छ। अर्को पटक उनीहरूको एन्ड्रोगेल लिने उचित प्रशासन र साइड इफेक्टमा सल्लाह दिने मौका हुन सक्छ। अन्य पुरुषहरू पनि प्रयास गर्न इच्छुक हुन सक्छन् पूरक वा हर्बल उत्पादनलाई उनीहरूको टेस्टोस्टेरोन बढावा दिन, जसले तपाईंको चिकित्सा सल्लाहलाई पनि वारेन्टी गर्न सक्दछ।
पुरुष बिरामीहरूसँग कसरी कुराकानी गर्ने
सामाजिक नियमहरूले पुरुषहरूको स्वास्थ्य समस्याहरूको वरिपरिको सञ्चारमा अवरोधहरू सिर्जना गर्न सक्दछ। हुर्कदै, केहि पुरुषहरूलाई आफ्ना भावनाहरू लुकाउन, बलियो हुन, र दुखाइ बेवास्ता गर्न सिकाइन्छ। यी मनोवृत्तिहरू हानिकारक हुनसक्छन् जब यो तिनीहरूको स्वास्थ्यको लागि आउँदछ।
जहाँसम्म, धेरै व्यक्तिहरू औषधि वा अन्य आईटमहरूको लागि फार्मेसीबाट रोक्दछन्, तिनीहरू सुविधाको बाहिर फार्मासिष्टसँग कुरा गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ।
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि सबैजना एउटै तरीकाले संचार गर्दैन। त्यहाँ कुनै एक आकार-फिट-सबै समाधान छैन जब पुरुष र महिलाको विरुद्ध परामर्श। व्यक्तित्व, अन्य कारकहरू बीच, निर्धारण गर्न सक्दछ कि तपाईं कसरी आफ्ना बिरामीहरूसँग संवाद गर्नुहुन्छ र उनीहरूले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्।
यहाँ केही विचारहरू छन् जुन तपाईं पुरुष बिरामीहरूसँग कुरा गर्दा प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
सहानुभूति देखाउनुहोस्, दया होइन
कोही पनि असहाय वा नियन्त्रण बाहिरको महसुस गर्न चाहँदैनन्। स्वास्थ्य समस्याहरूले बिरामीहरूलाई कमजोर महसुस गराउन सक्छ र परिवारको प्रदाता वा नेताको रूपमा व्यक्तिको पहिचानलाई चुनौती दिन सक्छ।
उनीहरूलाई देखाउँनुहोस् कि उनीहरू कुन माध्यमबाट पार हुँदैछन्। औषधी वा जीवनशैली परिवर्तनहरूको सिफारिश गर्दा पनि उनीहरूले यो विकल्प दिन सक्दछन् कि उनीहरूले उनीहरूले जस्तो सम्झौता गरेमा उनीहरूले उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँछन्।
स्पष्टताको अभावले पुरुषहरूसँग खुला कुराकानीमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। प्रत्यक्ष हुनुले दिएको उपचार योजनाको साथ संलग्नता उत्पन्न गर्न र कुनै पनि गलतफहमीहरू रोक्न मद्दत गर्दछ। ठोस समाधान प्रदान गर्नुहोस् र कसरी, के, कहिले, वा कहाँबाट सुरू हुने निश्चित प्रश्नहरू सोध्न सक्रिय सुन्न प्रयोग गर्नुहोस्। केहि सीधा प्रश्नहरूमा समावेश हुन सक्छ:
तिमीले कहिलेसम्म पीडामा छौ?
तपाईं कति पटक रक्सी वा धुम्रपान पिउनुहुन्छ?
तपाईं कहिले आफ्नो औषधि लिनुहुन्छ?
तपाईको खाना कस्तो छ?
तपाइँको निद्रा तालिका कस्तो छ?
लक्ष्य सेटिंग्स प्रोत्साहित गर्नुहोस्
पुरुषहरू उपचार प्राप्त गर्दा लक्ष्य प्राप्त गरेर प्रेरित हुन सक्छ। उनीहरूको रक्तचाप लक्ष्यहरू वा अन्य स्वास्थ्य मेट्रिक्सको सम्झाउनुहोस्। सिफारिश गर्नुहोस् उनीहरूले चुनौती दिए। उदाहरण को लागी, days० दिन को लागी प्रत्येक दिन २० मिनेट व्यायाम गर्नुहोस् र यसको अन्तमा वजन परिवर्तन गर्नुहोस्।
अवरोधहरू पार गर्नु माइलस्टोनहरूको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ र पुरुषहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यसँग व्यस्त राख्न सक्छ। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सेट गर्नु भएको लक्ष्यहरू यथार्थपरक र उनीहरूको स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि सान्दर्भिक छन्।
toenail फg्गल एप्पल साइडर सिरका को लागी उपचार गर्दछ
फार्मेसीमा पुरुषको स्वास्थ्य प्रचार गर्नुहोस्
अन्तमा, यो पुरुषको स्वास्थ्य समस्याको महत्त्वको प्रश्न होईन। यो उनीहरूको जोखिम कारकहरू र उपचार विकल्पहरूमा पुरुष जागरूकता र शिक्षाको बारेमा छ। स्वास्थ्यसेवा पेशेवरहरूको रूपमा, फार्मासिष्टहरूले पुरुषहरूलाई उनीहरूको भलाईको लागि र बाँकी वकालतहरू गरेर उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छन् उनीहरूलाई आफ्नो डाक्टरलाई भेट्न प्रोत्साहित गर्दै स्क्रीनिंग र उपचार को लागी।पुरुष विशेष मुद्दाहरूको लागि अन्य स्रोतहरू केहि बिरामीहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ। संगठनहरू मनपराउँदछन् पुरुषको स्वास्थ्य नेटवर्क जागरूकता बढाउन र विश्वव्यापी रूपमा पुरुषहरूको स्वास्थ्य समर्थन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
Antiemetics: प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
चिकित्सा शर्तमा hct को मतलब के हो
तपाइँ कसरी आफ्नो रक्त प्रकार पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ
degree degree डिग्री तापमान को मतलब के हो
एक दिनमा रक्तचाप कसरी कम गर्ने
मेरो उच्च रक्तचाप कम गर्न म के गर्न सक्छु?
दमको लागि सिंगुलाइर लिन उत्तम समय
उच्च रक्तचापका लागि बीटा ब्लकरहरूको सूची